प्रधानमन्त्री नै राजधानीकी एक यौ’नकर्मी म’हिलासँग सु’त्न गएको खुलासा ! - Samachar Post Dainik
प्रधानमन्त्री नै राजधानीकी एक यौ’नकर्मी म’हिलासँग सु’त्न गएको खुलासा !
एजेन्सी ,भनिन्छ, प्रधानमन्त्री देश चलाउने पदीय जिम्मेवारी बोकेको मानिस हो ।
त्यो पदका थुप्रै सीमा हुन्छन् । गै’रकानुनी बस्तुको उपभोग र संरक्षण दिन पनि पाइदैन् । तर, यहाँ अ’वैध यौ’नधन्दा चलाउने एक यौ’नकर्मी महिलाको काखमा सु’त्न प्रधानमन्त्री समेत जाने गरेको खु’लासा भएको छ ।
बेलायतको राजधानी लण्डनकी एक यौ’नकर्मी महिलाले स’नसनीपूूर्ण खु’लासा गरेकी छिन् ।
मसाज पार्लरको नाममा राजधानी लण्डनमा २० वर्षदेखि यौ’नधन्दा चलाउँदै आएकी ४२ वर्षीय माइरा लिंग फोर्बले देशका प्रधानमन्त्री समेत यौ’नस’म्पर्कको स’न्तुष्टि लिन आफूसँग सु’तेको खु’लासा गरेकी हुन् ।*
* यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तलकाे लिंकमा क्लिक गर्नुहोला **
त्यो युगल जोडीको बच्चा नहुनुमा बाबु दोषी रहेको खुल्न आएको छ । बच्चा नपाएकोमा उनले एक्लो छोरा र बुहारीलाई नाति–नातिना नजन्माउन दबाब दिनु नै प्रमुख कारण भएको खुल्न आएको हो ।
प्रत्येक बुबा आफ्नो छोराले आफ्नो पुस्तालाई अगाडि बढाउन चाहन्छन्, तर यो कुरा एकदम फरक छ । पहिलो पटक, त्यस्ता वृद्ध देखा परेका छन, जसले आफ्ना छोराबुहारीलाई आफ्नो स्वार्थको लागि बच्चा नजन्माउन दबाब दिइरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा बुबाले उसलाई डराउनुपर्दैन भनेर वर्णन गर्नुपर्दछ । कानून उनीहरूको लागि बनेको छ ।–रेणु शर्मा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भोपाल
वृद्धहरूमा असुरक्षा बढेको छ । यस्तो व्यक्तिको व्यवहार परिवर्तन हुन थाल्छ। सोच परिवर्तन हुन थाल्छ। यस अवस्थामा छोराले आफैले निर्णय गर्नुपर्नेछ।–डा.राहुल शर्मा, चिकित्सा मनोवैज्ञानिक, भोपाल कुनै पनि व्यक्तिले भरण–पोषणको लागि अदालतमा सीआरपीसीको धारा १२५ अन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।
यसमा अभिभावकहरू पनि समावेश छन् । यदि अदालत चाहन्छ भने, यसले धारा १२८ अन्तर्गत अन्तरिम भरण–पोषणका लागि आदेश जारी गरेर राहत प्रदान गर्न सक्दछ ।
प्रकाशित मिति ११ जेष्ठ २०७८, मंगलवार १५:२५